Apple tinye ego ijeri dollar 10.000 na R&D na 2016 | Esi m mac
Kedu ihe Apple na-etinye $ 10 nde ego na R & D?
Tụle ọtụtụ ndepụta nke asịrị na-ekesa na netwọk, Apple bụ na a bụrụkwa oge nke nwere ike ịpụta a ebe ntinye na njikwa ụlọ ọrụ. Anyị maara nke ahụ iPhone ahịa na-adalata na ndị ọrụ ahụ na-arịọ maka mmegharị nke ngwaahịa dịgasị iche iche, ebe ndị nke Cupertino na-aga n'ihu na-eweta ndozi ndị na-anaghị agwụcha inye aka dị iche iche.
Mmefu ego nke Apple na-arara R & D na-eto eto kwa afọ na-eso usoro kwesịrị ekwesị uto nke ulo oru n'onwe ya. Agbanyeghị, kemgbe ha tinyere ego ijeri dọla 2014 na 6.000, enwere mgbanwe dị oke mkpa na atụmatụ. Na 2016 Apple ararawo ihe karịrị ijeri dollar 10.000 na R&D na-eme atụmatụ na na 2017 ha ga-akarị nde 12. Gịnị ka Apple raara nnukwu ego a na R&D?
Akụkọ anyị na-enweta kwa ụbọchị banyere ya n'ọdịnihu dị nso nke ngwaahịa Apple Ha na-arụtụ aka na mmeghari ohuru nke Macbook na Macbook Pro. Njikọ ahụ na ARM na AMD iji mejuputa teknụzụ ndị ọzọ na-arụ ọrụ nke ọma na kọmputa ha yana njikọta na ndị isi nke azụmahịa ụwa dịka SAP na IBM, ọ dị ka ị ghara ịkọwa nnukwu ego a na oru mmepe.
1 Apple ugbu a ọ nwere ebe dị nro?
2 Apple Apple ọ bụ naanị ọrụ nyocha?
Apple ugbu a ọ nwere ebe dị nro?
Na a mfe analysis nke mpi, anyị pụrụ ịhụ na Apple raara mgbalị ya nile na mgbanwe nke 5 ngwaahịa ahịrị nke otu ụdị teknụzụ ahụ, ebe ụdị ndị ọzọ na-ekpuchi ọtụtụ ụdị, nke pụtara ụfọdụ mwepu na-ele anya n’odinihu, n’agbanyeghi ikike di uku nke imeputa ihe ohuru nke o na egosi mgbe nile. Kedu ihe Apple na-eme na nke a?
Ọganihu dị ukwuu na mmefu ego nke ewepụtara maka R&D na 2015 dabara na asịrị mbụ nke mmepe nke Titan oru ngo, nke ahụ ga-ewetara anyị ụgbọ ala Apple, ụgbọ ala mbụ nke ụlọ ọrụ ahụ. Anyị maara na ị mepụtara otu ìgwè nke ihe karịrị 1000 ndị mmadụ na-eduzi Steve Zadesky, anyị maara kọntaktị n’etiti ndị isi Apple na Tesla na Magna Steyr - ndị nrụpụta nke ụgbọala ndị dị elu - na nke ahụ, ọ bụ ezie na ekwenyebeghị ya, ọ nwere ike ịbụ ụgbọ ala eletrik. Ihe niile na - eduga anyị iche na Apple gbasaa ala ihu mgbanwe nke ahịa.
Apple Apple ọ bụ naanị ọrụ nyocha?
Mmepe nke Apple Car bụ nnukwu ọrụ ụlọ ọrụ. Anyị amatala nke a n’oge na-adịbeghị anya ị nwetala ezigbo ala, dị ka ụlọ ọrụ mmepụta ihe mbụ nke Pepsi dị na Sunnyvale, 1km site na mgbagwoju nke ụlọ 7 ndị bụbu akụkụ nke nke ahụ stealthy ịmụba ọnụ.
Ilitieslọ ọrụ enwetara na Sunnyvale maka mmepe nke Apple Car.
All data metụtara nke a nnukwu ego Ha na-atụ aro na ọrụ Titan agaghị adịgide na ngosipụta nke otu ụdị ụgbọ ala, mana Apple nwere ike ịbụ ịkụ nzọ dị egwu na mmụba site na azụmahịa gị na ihe ohuru.
Isi mmalite - N'elu Avalon
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Kedu ihe Apple na-etinye $ 10 nde ego na R & D?
'Batman: Arkham mgbapu' belatara site na 70% Mac App Store
iTranslate 2.0 n'efu maka obere oge